Daawo sawirada qaraxii ka dhacay agagaaraha Madaxtooyada & faahfaahin – SBC
Daawo sawirada qaraxii ka dhacay agagaaraha Madaxtooyada & faahfaahin
Posted by editor on March 14, 2012 Comments
Warar faahfaahsan ayaa ka soo baxaya qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan afaafka hore ee xarunta madaxtooyada Villa Somalia.
Qaraxan ayaa wuxuu ka dhacay buush lagu shaaho oo ku dhaw guriga uu degan yahay Gudoomiyaha Baarlamanka KMG Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh ee xubno ka mid ah baarlamanka ay sheegeen inay xilka ka qaadeen, waxaana qaraxaasi ilaa iyo hada la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugug yaraan lix qof oo uu ka mid yahay ninkii qaraxaasi fuliyey.
Sidoo kale qaraxan waxaa ku dhaawacmey 5 qof oo kale kuwaasi oo qaarkood ay qabaan dhaawacyo culus, laguna dabiibayo isbitaalada magaalada Muqdisho, dadka dhintey ayaa waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan dawlada KMG kuwaasi oo goobtaasi ka agdhawaa.
Qof goob jooge ah ayaa sheegay in ninka qaraxa geystey uu soo fariistey maqaaxida shaaha laga cabo iyadoo mudo ka yar ka dib uu dhacay qarax aad u weyn oo meelo kala duwan oo caasimada ah laga maqlay.
Qaraxan ayaa waxaa sheegatey masuuliyadiisa xarakada Al-Shabaab oo ku tilmaamtey mid uu fuliyey wax ay ugu yeereen qoftiisii hure ah oo ka mid ah kooxdaasi.
subxaana laah ilaahaaw cadawga naga qabo
Cismaan cabdi dhiblaawe says:
Been aya laga sheegay walalkey cumar maxamed dhiblaawe kama danbayn qaraxa e asaga ku waayay naftiisii qaali ahayd